Inhlangano igubha iminyaka eyi-10 | News24
Inhlangano igubha iminyaka eyi-10
Isithombe: nosipho mkhizeUmholi we-Yenzanathi Community Upliftment Project uNkk Lydia Hlophe.
AMALUNGU enhlangano eyaziwa ngokuthi yi-Yenzanathi Community Upliftment Project imema wonke amalungu omphakathi ukuba ahlangayele nawo emcimbini yokugubha iminyaka eyi-10 yasungulwa.
Umholi wale nhlangano uNkk Lydia Hlophe uthe lo mcimbi uzobe use hholo lomphakathi elibizwa ngokuthi yi-Qadi Hall ngomhla ka-16 kuZibandlela (December) ngo 10 ekuseni.
Le nhlangano engenzi nzuzo yasungulwa ngo-2007 isungulwa abesimame abahlanu.
Laba besimame badlala indima enkulu emphakathini waKwaNyuswa njengoba bengamalungu e-Tribal Authority ku-ward 103 KwaNyuswa.
Inhloso yale nhlangano ukulekelela umphakathi ontulayo nalabo abadinga usizo nezindlela ezahlukahlukene emphakathini.
Njengamaje le nhlangano igxile kakhulu kwi-project yokunikela ngesobho nesinkwa kubantu abagama- 257 ababhalise ngaphansi kwale nhlangano.
“Umuntu ngamunye uthola isobho nezinkwa ezimbili kanye nge sonto.”
“Sicela umphakathi usixhase ngezipho zokunikelela abesifazane nabesilisa abadinga usizo. Sifisa ukwenza izikhwama ezine zipho [goodie bags]. esikwameni sabesifazane sifisa kube khona ama-pads, amathawula, umuthi wokuxubha amazinyo, isixubho, isiqholo samakwapha [roll-on] nensipho yokugeza. Esikwameni sabesilisa sifisa sibe nesiqholo samakwapha [roll-on], isixubho, umuthi wokuxubha amazinyo, insipho yokugeza nejazi likamkhwenyana [condom]. Konke lokhu kuzonikelwa ngosuku lo mcimbi, ” kusho uNkk Hlophe Uqhube wathi inhloso yalo mcimbi wukuthi begubhe iminyaka eyi-10 kwasungulwa inhlangano bephinde beqwashise abantu ngokuphepha njengoba sekuyisikhathi sokuphela konyaka.
“Umphakathi wamukelekile ukuba uzothamela lo mcimbi. Imali yokungena izo setshenziselwa ukukhulisa isikhwama sale nhlangano njengoba sihlela uhambo loku ngcebeleka ukuze sijabulise amalungu ethu njengoba esebenza kanzima. Sicela umphakathi usixhase ngamaphakathe ka swidi, amakhekhe, iziqholo, izixubho, umuthi wokuxubha, ama-chips, amakinathi, ama-raisins, ama aphula nobanana.”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngalo mcimbi shayela inombolo ethi: 073 122 2632 noma uthumele ngekheli le email elithi: yenzanathi@yahoo.com